Andro fitsangatsanganana lohataona - barbecue-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Andro fitsangatsanganana lohataona - barbecue
Fotoana: 2020-08-27 Hits: 23
Ny marainan'ny mey dia mafana sy mafana ny rivotra. Amin'ity vanim-potoana lohataona ity, ny departemantanay dia nikarakara barbecue fanompoana ho an'ny tenany any an'ala, ary avy eo nandeha tany amin'ny fanjonoana.
Ny tanjon'ity hetsika ity dia tsy fotoana tsara hanalana sasatra fotsiny fa ho fotoana tsara hivoahana mianatra. Ny tena zava-dehibe dia ny fampifangaroana ny fanahin'ny ekipa amin'ireo hetsika sy famoronana rivo-piainana izay iarahan'ny mpiasa rehetra miasa sy miasa ary mandroso.
Rehefa tonga teo amin'ny seranan-tsambo dia nanadio ireo akora rehetra novidianay omaly ary nanomboka ny barbecue. Na dia tsy ampy tsara aza ny teknolojianay, azontsika atao ny manao azy matsiro kokoa rehefa avy nanangona traikefa tsy nahomby maro. Ny tena reraka amin'ity barbecue ity dia i Allen. Araka ny hitanao amin'ny sary, i Allen dia toy ny ray miasa mafy izay nipetraka teo akaikin'ny grill mba hanomezana sakafo ireo zaza noana.
Avy eo dia nanjono hantsam-bozaka izahay. Asa atao amin'ny faharetana ity. Rehefa apetrakao ny tadim-pohy dia mila miandry mangina mandritra ny fotoana fohy isika, hofatorana ny lobster, avy eo atsangano moramora ny farango ary samborina amin'ny harato kely ny lobster, fa raha tsy manam-paharetana isika dia afaka mandositra ilay ulang. Tahaka ny asantsika io, mila faharetana sy fanoloran-tena isika raha te-hahazo naoty tsara.
Ary farany, na dia reraka aza ny tsirairay amintsika, dia mbola faly ihany miverina.
Previous: Fetin'ny mpiasa
Next: Dingana fampidirana kaontenera